भाइरल जोडीलाई आयो यति धेरै सहयोग,बाजेले गरे सबैको मनै छुने यस्तो कुरा ! – Complete Nepali News Portal
भाइरल जोडीलाई आयो यति धेरै सहयोग,बाजेले गरे सबैको मनै छुने यस्तो कुरा !
पछिल्लो सय निकै नै चर्चामा रहेका भाइरल दम्पतीलाई सहयोग आएको छ ।
निकै अचम्म लाग्ने जोडी जसमा ६८ बर्षका वृद्धले २१ बर्षकि युबतीसंग बिबाह गरेपछि जताततै उनिहरुको चर्चा चलेको थियो । निकै गरिबीमा परेका वृद्ध जसको घर अनि खानलाई अन्न समेतको समस्या छ । वृद्धसंग विवाह गरेकी युबतीको पनि आफ्नै छुट्टै बेदना छ ।
एउटा हात नभएकी युबतीको पहिले नै एकजना संग बिबाह भएर एउटा छोरो समेत भइसकेपछी श्रीमानले छाडेको र एक्लो भएको बताउने पुजा लिम्बुले आफुले साहारा पाइन । वृद्धको घरको अवस्था नाजुक त छदैछ त्यसमाथी उनको जेठा छोरा मोहन थेगिम जीवन र मृत्युुको दोसाँधमा वीर हस्पिटलमा उपचाररार्थ छन ।
पुर्बेली लोक गायक मोहन थेगिमलाई विभिन्न किसिमका रोगहरु लागेको र उपचार गर्दागर्दै पैसा सकिएर बिजोक भएपछि अहिले चारैतिर सहयोगको अपिल गरिएको छ । दमकका समाजसेवी कुमार राई र उनका साथी दुईजनाले सहयोग गरेका छन । उपचारका लागी खर्च गरिने रकम पाएपछि वृद्धले आँखाभरी आँसु पार्दै सबैको मनै छुनेगरी य्यस्तोसम्म सुनाए ।
तलको भिडियोमा हेर्नुहोला मन छुनेछ ।